जिन्दगी उही ड्राइभरको हातमा… ! « News24 : Premium News Channel
जिन्दगी उही ड्राइभरको हातमा… !
पहाडी भूवनोट , सडकको दुरावस्था र मापदण्ड विपरितका सडकहरु । हुन पनि हो यात्रा गर्ने हरेक नेपालीको भाग्य डाइभरको भरमा छ । भाग्यको भरमा यात्रा गर्नुपर्ने नेपालीहरुको नियति निरन्तर छ । दर्दनाक दुर्घटनाहरुले छोडेको पनि छैन र यो रोकिने संकेत पनि छैन । गन्तव्यसम्म पु¥याए त्यही ड्राइभर भगवान मानिन्छन यात्रुका लागि तर दुर्घटनाको दोष पनि त्यही ड्राइभरहरु भोग्न विवश छन् । तर दुर्घटनाको खास कारण खोजेर यस्को न्यूनीकरणका लागि कुनै पनि निकाय तत्पर देखिएको छैन ।
यात्रामा निस्किएका सयौं यात्रुको जिन्दगी एक जना चालकको हातमा रहने गर्दछ । चालकको सानो गल्तीले निमेषभरमा थुप्रैको ज्यान जान सक्छ । यदि चालकहरुले संयमता नअपनाए ठूलो दुर्घटना निम्तिने हुनाले हुन पनि हरेक यात्राहरु उनीहरुकै हातमा निर्भर छ । विश्वव्यापी चासो बनिरहेको सडक दुर्घटना नेपालमा पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही, ट्राफिक नियमको पालना नहुनु तथा सडकको दुरावस्थाका कारण नेपालमा सडक दुर्घटना बढ्दो छ । सडक दुर्घटनाका धेरै कारणमध्ये मुख्य कारण सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही नै हो । नेपालको ट्राफिक प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहनु र सवारी चालकले सडकको वास्तविकता बुझ्न नचाहने प्रवृत्तिले दुर्घटना विकराल बन्दो छ ।
तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, अनावश्यक प्रतिष्पर्धा, प्राविधिक तथा यान्त्रिक खरावी भएको सवारी चलाउने, क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने, जोखिम मोलेर नयां र अप्ठ्यारो सडकमा सवारी चलाउने, हेलचेक्र्याई तथा तनावमा सवारी चलाउने, कम उमेरमा ठुला सवारी चलाउनु, सडक प्रयोगबारे ऐन कानुन बारे चेतना नहुनु र मदिरा सेवन दुर्घटनाका मुख्य कारण मानिएका छन् । सडक यातायात नेपालीलाई विकल्पहिन विकल्प हो ।
जलमार्गको सम्भावना नभएको, रेल मार्गको विस्तार भै नसकेको र हवाई मार्ग अधिकांश नेपालीको पहुंँच बाहिर रहेकाले सडक यातायात एक मात्र भरपर्दो यात्राको माध्यम हो ।
तर, सडक यातायात असुरक्षित बन्दै गईरहेको छ, सडक दुर्घटना र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । दुर्घटनामा निर्दोष नेपालीहरुले अकाल मृत्युवरण गर्नु परेको छ । यस्तो, अवस्थामा एक पक्षले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहने भन्दा पनि सडक दुर्घटनाका पक्षहरु केलाएर त्यस्को न्यूनीकरणका लागि लाग्न आवश्यक छ । नजिकिदो चाँडवाडका समयमा पनि यसतर्फ ध्यान पु¥याउन झनै आवश्यक छ । यातायात व्यवसायीहरुका लागि ‘कमाउको बेला’ पनि खासमा यही हो । तर यातायात क्षेत्रमा उत्पन्न पछिल्लो विवादले पनि यातायात व्यवसायी कति निर्दयी छन भन्ने प्रष्ट भएको छ नै । सरकारले यहीनेर कठोरता प्रदर्शन गर्नुपर्ने ठाउँमा व्यवसायीसंग चुकेपछि थप चुकचुकाउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यस्तामो ड्राइभरलाई मात्र दोष दिनु न्यायसंगत होला र ?